Mulkiilayaasha mataatuuda oo ka soo horjeestay amar ka soo baxay NTSA – The Voice of Northeastern Kenya
Mulkiilayaasha mataatuuda oo ka soo horjeestay amar ka soo baxay NTSA
Star FM March 12, 2018
Guddoomiyaha ururka ay ku bahobeen mulkiilayaasha mataatuuda ee Simoni Kimutai ayaa sheegay inay ka soo horjedaan arrin uu dhawaan shaaca ka qaaday maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka ee NTSA.
Maamulkan ayaa sheegay in laga bilaabo maanta la daahfuraya tababaro la siinaya wadayaasha baabuurta ay dadweynaha ku safraan.
Hasa ahaate Mr.Simon ayaa ku andacoonaya in howshaasi aanan cid kasta oo ay quseysa lagala tashan.
Maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka ee NTSA ayaa dhanka kale sheegay in turxaan bixin hor leh lagu sameynaya dugsiyada laga barto kaxeyynta gawarida iyo wadayaasha baabuurta dadweynaha ee loo yaqaano PSVs.
NTSA ayaa sheegtay in howshan ay qeyb ka noqonayaan sarakiisha NTSA, ciidamada wadooyinka ee loo yaqaano taraafikada iyo wasaradaha arrimaha gudaha iyo gaadiidka.
Waxaa looga gol leeyahay in meesha laga saaro xarumaha ku howlgalaya sida sharci darada ah.
Agaasimaha maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka Francis Meja ayaa sheegay in wadayasha baabuurta dadweynaha ay ku safraan oo la turxaan bixiyo ay horseedeysa in loo hoggaansamo shuruucda wadooyinka.
Waxaa uu wacad ku maray in shirkad baabuur oo kasta oo aanan u hoggaansamin shuruucda lagala laabanaya shahaadadii lagu diiwangeliayy.
Mr. Meja ayaa ujeedada laga leeyahay turxaan bixinta ku sheegay in la yareeyo ugu dambeyna meesha laga saaro shilalka wadooyinka.
← DHAGEYSO Maamulka Jubbaland oo Amaro ku soo Soo Rogay Shirkadaha Duulimaadyada ee deeganadaasi
In ka badan 30 kiis oo racfaan ah oo maxkamada la geeyay →
Dowladda oo amartay in la baaro cillad shalay ku timid M-pesa December 9, 2018
Xildhibaanka Garissa Township oo caawinaya arday walaac ka muujiyay inuusan ku biiri karin dugsiga sare December 9, 2018
Madaxweyne ku xigeenka dalka oo berri xariga ka jaraya waddooyin laga dhisayo Garissa December 9, 2018
Maalinka la dagaalanka musuqmaasuqa oo caalamka laga xusayo December 9, 2018
Madaxweynaha iiraan oo xayiraadda Maraykanka ku tilmaamay argagixisanimo December 9, 2018
Xildhibaanada baarlamaanka oo la fasaxay December 9, 2018
Saraakiil ka tirsan waaxda NHIF iyo Kenya Pipeline oo berri maxkamadda la soo taagayo December 9, 2018
Mulkiilayaasha baabuurta aanan diiwaangashanayn oo loo digay December 9, 2018
Safaricom oo sheegtay inay xalisay cilad ku timid adeegga M-Pesa December 9, 2018
Ammaanka ismaamulka Lamu oo la adkeeyay December 9, 2018
Dowladda oo amartay in la baaro cillad shalay ku timid M-pesa
Xildhibaanka Garissa Township oo caawinaya arday walaac ka muujiyay inuusan ku biiri karin dugsiga sare
Madaxweyne ku xigeenka dalka oo berri xariga ka jaraya waddooyin laga dhisayo Garissa
Maalinka la dagaalanka musuqmaasuqa oo caalamka laga xusayo
Madaxweynaha iiraan oo xayiraadda Maraykanka ku tilmaamay argagixisanimo
Xildhibaanada baarlamaanka oo la fasaxay
Saraakiil ka tirsan waaxda NHIF iyo Kenya Pipeline oo berri maxkamadda la soo taagayo
Mulkiilayaasha baabuurta aanan diiwaangashanayn oo loo digay
Safaricom oo sheegtay inay xalisay cilad ku timid adeegga M-Pesa
Ammaanka ismaamulka Lamu oo la adkeeyay